ipapashwe 25th EyeThupha 2015 ngokuthi Mateyu Woodward & efayilini phantsi Ostreliya, eNgilani, Test Cricket, uthuthu. uvuselelwe 3rd EyeDwarha 2016 .
Ngalo lonke uchungechunge bendizama ukucinga ngokudityaniswa neshumi elinanye kuwo omabini amacala. Kwaye umdlali weenkwenkwezi. Kodwa enyanisweni ndicinga kukho eninzi, okubhetele, good play­ers between the two sides who have played in the series and very few have per­formed to a good standard.
Kwilizwe laseNgilani uJoe Root uqhubekile ngokuhlaba umxhwele kwaye yayikukuphela kwesigqibo somntu owayeza kuthi aluthathe uluhlu (ngaphandle kokhetho lweStuart Broad). Moeen Ali (kuya kufuneka ukuba uphakame ngaphezulu-njengokuvula) uchukumiseke ngumngcwabo ukuba akunyanzelekanga ukuba ube lolusu. Ubanzi kunye no-Anderson bakhothwe kakuhle, ngamanye amaxesha ngobuqaqawuli. U-Wood kunye no-Stoke bayaqhubeka nokuthembisa kakhulu. Kuhle ukubona Steven Finn umva nangona ukuba wonke kufanelekile andule uphulukana phandle. UTim Bresnan ubonakala ngathi ugxothiwe ukubuyela e-Yorkshire. UJos Buttler wayeneqela elibi kakhulu kunye ne-bat kodwa enobuchule kwelinye icala lesiqu. Imibuzo iya kubuzwa kodwa, Unikwe uJonny Bairstow ukwaziwa ngokugqibeleleyo kunye neiglavu. Ngokuqinisekileyo u-Ian Bell usebenzise ixesha lokugqibela ebomini bakhe abalithoba - akanakuthembela nje xa kufanelekile - kwaye kuya kuhlala kubonakala ukuba uAdam Lyth uzakuphinda adlale ikhilikithi kwakhona. Ngamaxesha amaninzi wabulaleka ngenxa ye-10 engaqhelekanga ukubaleka kuphela ekufumaneni ukuba ubuyela endaweni yepayipi. Ukupheka kukwenze ukuba ubethe kakuhle kwaye ubanjiwe kakuhle (Ndizomthethelela ebethukisa kwiOval).
Akukho namnye ubalaseleyo e-Australia. USteve Smith wabaleka kodwa kwi-Aussie encinci enobuhlobo kunye noPeter Siddle bekumele ukuba badlale yonke imidlalo. Oko iindwendwe bezicinga ukuba azimdlali kwasekuqaleni andisokuze ndiyazi. Abavulekileyo baphinda babamba imbaleki embalwa kwaye uDavid Warner ekugqibeleni wayikhupha loo ndevu ehlekisayo. Ininzi le umgca akayi kubonwa kwezi elunxwemeni kwakhona.
Ukuqhubela phambili iNgilane ngokuqinisekileyo kungathatha ubugcwabalal. I-Ali iluncedo ekubuyiseleni umva- kodwa ayizukuphumelela umdlalo rhoqo. Ukucwangciswa okuphakathi kuthambekele ekuweni njengamacala akudala eNgilane kwaye kuyakhathaza ukubona. Umbuzo wokuba ngubani amaqabane Cook kwindawo ephezulu yeodolo uhlala ungaphendulwa.
Kuya kuba ngumdla ukubona into eyenziwa yiOstreliya ngemisebenzi emininzi kangaka yovavanyo ngoku okanye sele iza kuba.
Ukuze boo okanye hayi boo ...
1st EyoMsintsi 2015
Koko kulifanele iqela lam elidibeneyo loluhlu (ngaphandle kukaRodgers othathe umhlala-phantsi) iza Kubayi…
Kukho ugcino-lokufumana amanqaku aphezulu 4, kwaye ezinokubakho zibalekele ezantsi ukuya kwinani 9. 4 oomthungi kwaye 1 ispinatshi. Ngaphandle kukaSmith zilungele ngokufanelekileyo iimeko zesiNgesi. Intloni ithatha ukudityaniswa 11 Ukufumana olona nyango luphezulu nangona.
27th EyeThupha 2015
Ukuhamba kwangoko ukuya kubeka iBell. Linda de kubekho umntu okhuphisana naye. Ukucwangciswa okuphakathi kufuna amava xa uStoke enomzuzu wakhe wokuphambana.
Ali kwi 6, Izitovu ku 7 noButtler kwi 8 kubonakala kufanelekile ukuzama.
Ndine-Plunkett eyam 12 ukhetho oluchanekileyo.
Ixesha lokuzama iRashid? Andikwazi ukuba mde ngoku.
Into enkulu engaziwayo kukuba ngubani oza kuvula kunye noMphathi. Iimpendulo ezintathu ezinokubakho: buyisa iTrott, Trescothick or Boycott!